जितपुरबासी भन्छन, ‘सरकार ! बाँदरले न खान दियो, न बाँच्नै दियो, न त खेतिपाती नै गर्न दियो ’ – Newsagro
Agriculture Feature Main News Nature जितपुरबासी भन्छन, ‘सरकार ! बाँदरले न खान दियो, न बाँच्नै दियो, न त खेतिपाती नै गर्न दियो ’ April 15, 2017April 16, 2017
‘सरकार ! बाँदरले न खान दियो, अदुवा, काउली, कागती, काभ्रेस्थली र झोर फुटुङ्ग, केराउ, कोदो, गहुँ, गोलढुङ्गा, चित्रवहादुर श्रेष्ठ, जग्गाहरु बाँझै, जितपुर, जितपुरबासी भन्छन, ज्यामिर, तारकेश्वर नगरपालिका स्थित वडा नम्बर ३ तिनपिप्ले (साविकको जितपुर), धर्मस्थली, धान, न बाँच्नै दियो’, निवुवा, नुवाकोटको ओखरपौवा, पिडालु, बाँदर आतंक, बाँदरका कारण खेत बन्यो सोत्तर, बाँदरको हुलले आक्रमण, बिमिरो, बेसार, मकै, राष्ट्रिय किसान आयोग, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी, वकुल्ला, वन्दालगायतका तरकारी र फलफूल वाली बाँदरले खाएर सोत्तर, शिवपुरी नागार्जुन निकुञ्ज, हिंसक बाँदर
This post has already been read 917 times!बाँदरका कारण खेत बन्यो सोत्तर, जग्गाहरु बाँझै
भरण पोषण गर्न तयार छौं स्थानीय किसानहरुले सरकारले बाँदरको आतंक दीर्घकालिन रुपमा समाधान गरिदिए बाँदरलाई खुवाउन आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको रुपमा मकैसहित अन्य खाद्यान्न हरेक घरधुरीले उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । स्थानीय बासिन्दाले शिवपुरी नागाअर्जुन निकुञ्जमा केज बनाएर बाँदरलाई थुनेर राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । केजमा सुरक्षित रुपमा राखेर पाल्दा बाँदरलाई आवश्यक पर्ने खानाका रुपमा खाद्यान्न मासिक वा वार्षिक रुपमा हरेक घरधुरीले उपलब्ध गराउन तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।